११७४ पटक पढिएको
भित्तामा क्यालेण्डर फेरिएका छ तर दिनचर्यामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । गएको ११ गतेदेखि लगातार लकडाउन छ । गृहबन्दी जस्तो अवस्थामै भए पनि सम्बत परिवर्तन भएको अर्थात नयाँ वर्षको प्रारम्भको अवसरमा सम्पूर्ण पाठक तथा प्रिय जनप्रति कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने सामथ्ग्र्य प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
गत डिसेम्बर ३१ तारिखका दिन दिउँसो १ बजेर ३८ मिनटमा चिनको औद्योगिक शहर वुहानको मासु बजारमा कोरोना भाइरस पहिलो पटक देखा पर्यो । त्यस पछि ९ जनवरी २०२० मा कोरोना भाइरसको संव्रmमणका कारण ६१ वर्षिय व्यक्तिको पहिलो पटक मृत्यु भयो । यो मृत्युसँगसँगै चिनको वुहानमा हज्जारौको संख्यामा संव्रmमण देखिसकेको थियो । चिनले नियन्त्रणको प्रयास तुरुन्तैदेखि थाल्यो । जनवरी १३ मा पहिलो पटक कोरोना भाइसर चिन बाहिर देखियो । थाइल्याण्डको बैंककमा एक जना ६१ वर्षिय व्यक्तिमा कोरोना भाइरस देखिए पछि यसले विश्व सयर गर्न थालेको पुष्टि भयो । यसबेलासम्म यो भाइसर कसरी सरिरहेको छ भन्ने पत्तो लागेको थिएन । जनवरी २० मा बल्ल यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ भन्ने पुष्टि भयो । त्यस पछि के भयो त्यो तपाई हामी सबैले व्यहोरी रहेका छौं । कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ रोगका कारण आज विश्व आक्रान्त छ । महामारीको इतिहासमा यो यस्तो देश्यान आइपर्यो कि विश्वका अधिकांश देशहरु स्तब्ध छन् । यस अघि यो मात्रामा कुनै पनि हैजाले विश्वलाई यति आतंकित गरेको थिएन ।
मानिसहरुको मृत्युको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने यसअघिनै विभिन्न खाने पेन्डामिक (हैजा) का कारण विश्वमा २० करोड भन्दा बढि मानिसको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक छ । छैठौं र चौधौ सताब्दीमा प्लेगबाट र १९१८÷१९१९ मा स्पेनिस फ्लुबाट मर्नेको संख्या हालसक्मकै ठुलो संख्या मानिन्छ । त्यस पछि इबोला, मार्स, जस्ता भाइरसबाट हुने हैजाहरुका कारण पनि धेरै मानिसको मृत्यु भइसकको छ । मानव सभ्यतामाथिकै सबै भन्दा ठुलो संकटका रुपमा यतिबेला विश्वमा कोरोना भाइरस मडारिरहेको छ । गएको तीन महिनाभित्र कोरोना भाइरसका कारण १ लाख १५ हजार भन्दा बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका २ सय भन्दा बढि देशहरु यो भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् । अधिकांश देशहरु लक डाउनको अवस्थामा छन् । एउटा देशबाट अर्को देश आवतजावत ठप्प छ ।
दुनियाँका मानिसहरु सबै आफ्नै घर भित्र कैदी जस्तो जीवनमा बन्धित छन् । मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने यो भाइरसका कारण जनजीवन दैनन्दिन कहाली लाग्दो बन्दै गइरहेकोछ । मानिसहरु एक आपसमा भेटघाट नगर्ने, नछुने, टाडै र गुप्त बस्नु पर्ने भएको छ । यसका लागि सामाजिक र भौतिक दुरी कायम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले आव्हान नै गरेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि आजसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरस विश्वमा १८ लाख भन्दा बढिलाई सक्रमण भइसकेको छ । संक्रमण हुने व्रmम तिब्र छ । दुनियाँका शक्तिशाली भनिएका देशहरु त्राहिमान बनेका छन् । पुरै युरोप धरासायी बन्दै छ ।
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोनाको उद्भव चिनले संक्रमणलाई केहि हदसम्म नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । त्यहाँ केहि दिनदेखि मृत्यु हुनेको संख्या नियन्त्रणमा छ । अन्य देशहरुले भने नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् । इटाली, इरान, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत जस्ता देशहरुले ठुलो संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी देश भारत पनि पुरै लक डाउनमा छ । १ अर्व २५ करोडको आवादी भएको भारतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाहिर गयो भने अकल्पिनिय जोखिम हुन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पर्ने छ । हालसम्म १३ जनामामात्र देखिएको संक्रमण अकल्पनिय रुपमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ । हाम्रो जस्तो देशमा संक्रमण बढ्यो भने हाम्रा लागि इतिहासमै सबै भन्दा ठुलो दूर्दिन सुरु हुने छ । अन्त्य कसरी हुन्छ त्यसको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
कोरोना भाइरस सुरु भएको १०० दिन पूरा गर्दैगर्दा नेपाल पूर्णरुपमा ठप्प भएको २१ औ दिन पुगेको छ । यसरी नै विश्वका अधिकाँश देशहरु निरन्तर ठप्प छन् । यो बेला आम नागरिकहरुलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् विद्युतीय माध्यमहरु जसलाई इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया (इ–मिडिया) पनि भनिन्छ । छापा माध्यम अर्थात प्रिन्ट मिडिया (पी–मिडिया) भने करिब करिब बन्द जस्तै छन् । भाइरस सर्ने आशंकाका कारण मानिसहरुले कुनै वस्तु या सेवामार्फत कसैसँग पनि संसर्ग गर्न चाहिरहेका छैनन् । त्यस मध्ये पत्रिका प्रकाशन र वितरणको जुन प्रकृया हो त्यो यस्तो बेलामा अपत्यारिलो जटिलतामा फसेको छ । जसका कारण अकल्पनिय संकटको सामना गर्नु परेको छ । कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरुका अधिकांस पत्रिकाहरु अवस्था उस्तै छ । प्राय सबै बन्द नै भएका छन् । नेपालमा पनि छापा पत्रकारिता करिब करिब बन्दै छ । झापाका पनि प्राय सबै पत्रिका बन्द छन् । बन्द हुनुका धेरै कारण होलान । त्यसमध्ये मुख्यत दुई वटा कारणका बारेमा यहाँ चर्चा गरिने छ ।
पहिलो कारण हो लक डाउन । लकडाउनमा कहि कतै कसैलाई पनि हिडडुल नगर्न सरकारले आव्हान गरेको छ । सरकारी निर्देशनका पालना गर्दा कोहि पनि हिडडुल गर्न पाइरहेका छैनन् । एक प्रकारको करफ्यु जस्तै भएको छ । यो दिनदिनै झनझन कडा हुँदै गइरहेको छ ।
दोस्रो कारण हो रोग संक्रमणको त्रास । दोस्रो कारणले बढि प्रभाव पारेको देखिन्छ । कफ्र्यु मात्र हुँदा त पत्रिका प्रकाशन र वितरणमा रोक लाग्दैन थियो । तर, भाइरस संव्रmमणको जोखिम हुने भनेपछि चाहि यो जोखिम मोल्न पाठक स्वयम् तयार छैनन् । यो घटनाले पत्रिकाको जीवनलाई ठुलो संकटमा पारेको छ । यसै पनि छापा पत्रकारिता सूचना प्रविधिको चुनौति झेलिरहेको थियो । प्रतिस्प्रधात्मक बजारमा आफुलाई जसो तसो टिकाइरहेको थियो । कोरोना प्रकरण पछि भने यसको प्रभावकारिता र निरन्तरतामाथि चुनौति थपिएको छ । यो बेला आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने पहिलो माध्यमका रुपमा टेलिभिजन च्यानलहरु, अनलाईन न्युजपोर्टलहरु, युट्युब च्यानलहरु र सामाजिक सञ्जाल छन् । यो सूचिमा पत्रिकाको उपस्थिति नगन्य छ ।
आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने संवेदनशील समयमा आफु बन्द भएर बस्नु पर्दाको पीडा यतिबेला दैनिक पत्रिकाहरुले व्यहोरी रहेका छन् । आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने हुटहुटीले पत्रिकाहरुले आफ्ना अनलाइन संस्करण विकास गरिरहेका छन् । यसो भन्नु भनेको पत्रिका भन्दा अनलाइन संस्करणहरु प्रभावकारी हुँदै गइरहेका छन् भन्नु नै हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण अवधि र त्यस पछिको समयमा हाम्रो पत्रकारिताले मुलत दुई खाले समस्या झेल्नु पर्ने हुन सक्छ । एउटा, पाठकको रुची र बानीमा आउने परिवर्तनको प्रभाव र अर्को पत्रिकाको बाजर र विज्ञपानमा पर्ने नकरात्मक प्रभाव । मुलत पत्रिकाका पाठकको रुची र बानीमा आउने परिवर्तनले छापा पत्रकारितासँगै अन्य पत्रकारितालाई समेत प्रभाव पार्ने छ ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक संञ्जालले आम नागरिकलाई सूचनाको सहज पहूँचमा पुर्याइदिएको छ । कुनै बेला सूचनाको पहिलो स्रोत पत्रकार हुने गर्दथे । हिजोआज सामाजिक सञ्जालले यो स्थान लिन थालेको देखिन्छ । अर्थात आम नागरिकले पहिला सूचना दिन्छन् र त्यसपछि पत्रकारले समाचार बनाउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय र स्रोतहरुको पुष्टिका लागि मात्र मानिसहरुले आम सञ्चारलाई उपयोग गर्न थालेको देखिन्छ । कुनै पनि घटनाको सूचनाको कच्चा सामग्री फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारले प्राप्त गर्न थालेका छन् । अमुक व्यक्तिको फेसबुकबाट प्राप्त भएको स्रोत सूचनाको व्याख्या, विष्लेषण र औपचारिकताका लागि मात्र अन्य सञ्चारमाध्यम हेर्न थालिएको छ ।
खास गरेर फेसबुके अभ्यासका कारण तत्काल सूचनामा पहुँच र छोटा छोटा वाक्यांशमा बानी परेका पाठकहरु अब कुनै सूचना या समाचारका लागि पर्खिएर बस्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसमा पनि लक डाउनका कारण लामो समयसम्म बन्द जस्तै भएर बसेका दैनिक पत्रिकाहरु पढ्न नपाए पछि पाठकहरुले बिकल्प खोज्ने र बानीमा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । हरेक विहान चियासँगै पत्रिका पढ्ने बानी भएका पाठकहरुको दिनचर्या बद्लिएको छ । यो क्रम बढ्यो भने पुन पुरानै अवस्थामा पाठक फर्कन सक्ने सम्भावना अन्त्यन्तै कम देखिन्छ । अर्थात पाठकको रुची र बानी परिवर्तन आइसक्नेछ । पत्रकारितामा पाठकको रुची र बानीको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । जुन कोरोना भाइरसको संक्रमणअवधिमा उथलपुथल वा फेरबदल हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पत्रकारिताले ठुलो धक्का व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
दोस्रो कुरा हो पत्रिकाको विज्ञापन बजारको । कोरोना भाइरसका कारण विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरु तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सन्सार भर छरिएर रहेका नेपालीहरु यो बेला आफ्नो देश सम्झिएर रोइरहेका छन् । विभिन्न कारणले बैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले यसपछि रोजगारी गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो उथलपुथल आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आज सम्पन्न भनिएका देशहरु कोरोना भाइरसको संक्रमण र लामो लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा पर्नेछन् । यस्तो बेला वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरुले रोजगार गुमाउने सम्भावना हुन्छ र उनीहरु नेपाल फर्कन बाध्य हुन्छन् । नेपालको अवस्था आजै राम्रो छैन । यो प्रकरण पछि झन ठुलो संकट आइपर्ने छ ।
एकातिर आर्थिक संकट चुलिन सक्ने देखिन्छ भने अर्को तिर पाठकहरुको रुची र व्यवहारमा परिवर्तन आएको हुनेछ । जब पत्रिकाका पाठकको रुची र बानी परिवर्तन हुन्छ भने स्वाभाविक रुपमा विज्ञापन बजार पनि बरिवर्तन हुन्छ । पाठकको रुची र बानीमा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ । यसैका आधारमा विज्ञापन बजारले आफ्नो उपस्थिति खोज्ने गर्छन् । योसँगै आर्थिक बजारमा आएको संकटले विज्ञापन बजारको अर्थशास्त्र तहसनहस भएको हुन्छ । केही प्रतिष्ठानहरु आर्थिक संकटको सामना गर्न नसकेर बन्द हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । धेरैको रोजगारी गुम्न सक्छ । ठुलो भनिएका वित्तीय संस्थाहरु समेत धरासायी हुन सक्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु टाँट पल्टन सक्छन् ।
आम सञ्चारका लागि मेरुदण्डका रुपमा रहेको विज्ञापन बजार नै तहसनहस हुन सक्छ । फेरी पुरानै अवस्थामा फर्कन आर्थिक बजारलाई धेरै समय लाग्न सक्छ । यस्तो बेला एकले अर्कोलाई टिकाउन च्यारिटी गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यतिबेला हाम्रा सञ्चार गृह र पत्रकारहरुले च्यारिटी गर्ने सामथ्र्य गुमाइसकेको हुन सक्छन् । धेरै विज्ञापन दाताहरुको चुल्हो चिसो भइसकोे हुन सक्छ । यो एउटा असाध्यै जटिल र कहाली लाग्दो अवस्था हो । यो अवस्थाले पत्रकारिता नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ । यो अवधिभर बन्द भएका सञ्चार गृहलाई पुन उठ्न निक्कै कठिन हुन सक्छ । हाल सञ्चालनमा रहेकाहरुले पनि नियमित प्राप्त गर्ने विज्ञापन गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । यस्तो बेला “एक पत्रकार एक अनलाइन” को अवस्थाबाट गुज्रदै गरेको हाम्रो पत्रकारितामा कुनै पनि सामुहिक नेतृत्वको सञ्चारमाध्यम जोखिममा पर्नेछ ।
सञ्चार गृहका लागि भन्दा पनि आफ्नै लागि समाचार लेख्ने र विज्ञापन खोज्ने प्रवृति बढ्दै गइरहेको बेलामा यो संकटले स्वाट्टै निल्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो झोलाको अनलाइनलाई पत्रकारले महत्व दिने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यो एउटा माकुराको नियती हो । यो नियतीबाट छापा पत्रकारितालाई बचाउन सक्नु आजको मुल चुनौति हो । यो चुनौतिको सामना गर्न हाम्रो पत्रकारिताले सामथ्र्य राख्न सक्नु पर्छ । त्यसका बारेमा छलफल र विमर्श सुरु गर्नु पर्छ । किनकी फेरी पनि समाजको असली रखवाला र समृद्ध नेपालको सम्वाहक स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिता नै हो । र यसभित्रको समाचारको आधिकारिता र औपचारिक दस्तावेजीकरण चाहि छापा पत्रकारिता नै हो ।
उल्लेखित छलफलबाट छापा पत्रकारिताको भविश्य छैन त ? भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । त्यस्तो होइन । अझै पनि छापा पत्रकारिताको भविश्यमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भइसकोको छैन । बरु यसको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो भनेको पाठक के चाहन्छन् ? पत्रकार के लेखिरहेका छन् भन्ने विषय पनि हो । पाठकका रुची एकातिर पत्रिकामा समाचार अर्को तिर भएका कारण पनि यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको हो । त्यसमाथि कोरोना प्रकोपको बहुआमिक प्रभावले यसलाई झन प्रतिकुल बनाउन सक्छ ।
कोरोनाका कारण विश्व आर्थिक बजारमा पर्ने असर र पाठकका बानीमा आउने परिवर्तनले एक हदसम्म छापा पत्रकारितलाई संकटमा पारेको छ । यसबाट उठ्न पर्छ र फेरि आम पाठकहरुको मन जित्ने गरिका सेवा र सामग्री पस्कन थाल्नु पर्छ । यो बेला एउटा चिलले आफुलाई पुनर्जन्म दिन कुनै गुफामा बसेर चुच्चो ढुंगामा बजारी बजारीकन रगताम्मे भएर काचुली फेरे जस्तो कठिन समयमात्र हो । जीवन त अझै बाँकी नै छ । जबसम्म पुस्तक प्रकाशन र पठन पाठनको युग कायम रहन्छ तबसम्म छापा पत्रकारिताको आयु रहन्छ । तर यसका लागि पाठक रुची र उनीहरुको बानीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिन जरुरी छ । यस्तोबेला संकट पछिको चुनौतिपूर्ण अवसरका लागि पत्रकारिताले आफुलाई तयार राख्नु पर्दछ ।
कोरोना प्रकोपमा पत्रकारका तीन कामः
यो बेला हामी पत्रकारका पनि केही जरुरी काम र जिम्मेवारीहरु छन् । मुलतः कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा सबै भन्दा बढि जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु र सञ्चारकर्मीहरु रहेका छन् । यसमध्ये स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ । राज्यको सामथ्र्य अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षाको कुरा राज्यको तर्फबाट हुने गर्छ र भइरहेको छ । तर, हामी अर्थात सञ्चारकर्मीहरु आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै सामथ्र्यमा कोरोना विरुद्धको युद्ध लड्न मैदानमा छौं । यस्तो बेला कसैले पनि पत्रकारको सुरक्षाका बारेमा उत्ति महत्व दिएको देखिदैन । बरु समाचार संकलनका बेला दुव्र्यवहार भएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातिर रोग संक्रमणको जोखिम, अर्को तर्फ सत्यतथ्य सूचना संकलनका जटिलता त्यसमाथि हुने दूव्र्यवहारका घटनाहरु र केहि अफवाहका कारण आइपुर्ने अपमानहरुलाई समेत हामीले व्यहोरिरहेका छौं । पत्रकारले यो बेला चौतर्फी आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो बेला विगतमा कहिल्यै नव्यहोरेको संकटको हामी सामना गरिरहेका छौं । हामीले आफ्नै सामथ्र्य र बलबुतामा यो संकटको सामना गरिरहेका हौं । अरुखाले संकट र समस्याहरुको सामना त हामीले इतिहासमा गरेकै हो तर यो संकटका केही छुट्टै विशिष्टता छन् । त्यसकारण यो बेला पत्रकारले गर्नु पर्ने कामहरु पनि विगतको जसरी नभएर फरक ढंगले गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि पत्रकारले महत्वका साथ तीन काम गर्नु छ । पहिलो काम हो, व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिने । किन भने यो कुनै राज्य व्यवस्था या विचारबाट उत्पन्न द्वन्द्व, आन्दोलन वा युद्ध होइन ।
जहाँ पत्रकारिताका विश्वव्यापी मान्यता र आदर्शका आधारमा प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्न सकियोस् । यो त रोग संक्रमणको कुरा भएकाले यसमा व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार हुने भएकोले व्यक्तिगत सुरक्षालाई पहिलो सूचीमा राखेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो, परिवार र समुदायको सुरक्षामा विशेष चासो राख्ने र तेस्रो काम हो, सार्वजनिक खवरदारी सहित आम जनसमुदायलाई सुसूचित गर्ने । हामीले सधै गरिआएको कामलाई यहाँ मैले तेस्रो स्थानमा राख्नुका परेको छ । किनकी सबै कुरा जीवनका लागि हुन् । जीवनको सुरक्षा पहिलो दायित्व हो । तसर्थ सधै तीन नम्बरमा पर्ने बुँदा यतिबेला एक नम्बरमा छ र सधै एक नम्बरमा पर्ने बुँदा आज तीन नम्बर छ । त्यसकारण यो संकटका केहि विशिष्ट चरित्र छन् भनिएको हो । यो हिजो कहिल्यैको जस्तो अवस्था होइन अर्थात यो असामान्य अवस्था हो । यो अवस्थाको गाम्भीर्यलाई राम्ररी बुझेर यी जिम्मेवारीहरुलाई कुसलतापूर्वक निर्वाह गर्दै विश्वलाई त्राहिमान पारिरहेको कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न हामी सबै सफल बन्नु छ । मानव सभ्यतामा आइपरेको यो संकट सामना गर्ने सामथ्र्य हामी सबैलाई प्राप्त होस् । कोरोना विरुद्धको लडाईमा घरै बसौ र हात धोएर लागौं । समुन्न समाज निर्माणका लागि असल पत्रकारिताको विकाशमा यो वर्षले योगदान गर्न सकोस्, नयाँ वर्ष २०७७ सालको सुखद अवसरमा हादिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तस्विर स्रोतः गुगल
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका सचिव हुन्)